Sagantaa Kibxata Sadaasa 23, 2021 - Independent Oromia
Sochii WBOn naannawa Magaalaa Finfinneetti taasisaa jiruun kan rifate, Mootummaan PP, sakattaan karroota Magaalaa Finfinnee shanan irratti taasifamu daran akka jabaatu; darbees, manni jireenyaa sabboontota Oromoo akka sakatta’amu taasisuu.
Daafii kanaan, adamoo fi hidhaan Oromoota Magaalaa Finfinnee fi magaalota ollaa sanii keessa jiraatan irratti raawwatamu akkaan hammaatee itti-fufee jiraachuu.
Dabalataan, jiraattonni Magaalaa Finfinnee naannoo ykn ganda isaanii [WBO irraa] akka tiksaniif jecha, keessattuu, bobbaa halkanii taasisuun gandarra naanna'aa [waardiyyaa dhaabbachaa] akka bulan dirqamsiifamaa jiraachuu.
Ajjeechaa fi saamicha Finxaaleyyii Amaaraan raawwatamu
Duulli duguuggaan sanyii Konyaa Baha Wallaggaa, Onoota kanneen akka: Guutoo Giddaa, Giddaa Kiiramuu fi Amuruu keessatti, humnoota finxaaleyyii Amaaraan Uummata Oromoo irratti, baatii darbe irraa qabuun bifa haarayaan baname, gara onoota ollaatti babal'achuun itti-fufee jiraachuu.
Haaluma kanaan, tarkaanfii Ona Leeqaa Dullachaa, gandeen: Horroo Alaltuu fi Agiroo jedhaman keessatti, Sambata Sadaasa 20 2021, humnoota kanneeniin yeroo wal-fakkaataatti fudhatameen, Oromoonni saddeet ajjeefamuu, qabeenyi dureeyyii Oromoo danuunis samamuu.
Sagantaa Kibxata Sadaasa 23, 2021